Boky miisa 455 no fanomezana avy amin’ny Oniversiten’ny Strasbourg ho an’ny Oniversiten’Antananarivo Sampana Soavinandriana Itasy. Notanterahana tamin’ny fomba ofisialy izay fanolorana izany ny alarobia 27 aprily lasa teo. Mpianatra 409 no mandranto fianarana sy fahalalana ao amin’ity toeram-pianarana ity. Mpianatra 204 izao no ao amin’ny taona voalohany ary 205 no ao amin’ny taona faharoa.
Mibahana tanteraka ny taranja siantifika izay atolotry ny « Faculté des sciences », fianarana momban’ny « Environnement », » Gestion de l’environnement », « Getsion et valorisation des ressources naturelles », ary « Energie renouvelable ». Ny ao amin’ny ESPA indray dia ahitana ny « Transformation Agro alimentaire » ary « Eau et environnement ». Miofana momban’ny « Communication territoriale » ireo mpianatra ao amin’ny FLSH Soavinandriana Itasy.
Efa misokatra ho an’ny mpianatra L1, sy L2 ny tranom-boky natokana handrantoana fahalalana. Hita tokoa fa ny boky no loharanom-pandrosoana. Azo avadibadika ny boky ka ny soa ihany no horantovina ao. Mitoetra ny soratra hoy ny fitenenana ka noho izany dia afaka ho lovain’ny taranaka fara-mandimby ny fahaizana atolony. Marihina fa vao tamin’ny 16 febroary lasa teo no nanaovana ny fangadiana fototra ny trano fianarana mirefy 21 amin’ny 6 metatra, ahitana trano fianarana 3 ary efa an-dalana amin’ny famitana azy izao ny tompon’andraikitra.